Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 31
Par Taratra sur 02/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
« Vina 2030, fisandratana mirindra ». Io indray ny hevi-dravina naroson’ ny filoha ho an’ny vahoaka malagasy. Tsara tokoa aloha raha mba manana fijery lavitra ny mpitondra. Ohatra, jereo ange ireo tetezana eny amin’ireo lalam-pirenena e ! Tery sy ety izy ireny satria tamin’ny fotoana nanamboarana azy dia mbola vitsy ny fiarakodia nivezivezy, ka tsy nisy olana. Ankehitriny, […]
Lasa iny ny janoary…
Par Taratra sur 01/02/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Henjana iny! Na ireo manana amby isam-bolana aza, mety nahatsapa kely ihany fa mafimafy ny nitsipaka iny volana janoary iny. Ny fety tsy maintsy natao ny taom-baovao. Ny adidy manaraka ny velon’aina rehetra teny ihany. Nivatravatra tsy nasaina koa ny rivo-doza sy ny andro ratsy, nanampy trotraka ny efa fahasahirana isaky ny maitsoahitra. Efa lasa […]
Par Taratra sur 31/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Lasa iny ny janoary, heverin’ny maro ho anisan’ny volana lava sy mafy indrindra ao anatin’ny taona. Rehefa tena zohina anefa, tsy misy fahasamihafana intsony ny fotoana eto amintsika, satria efa iainana isan’andro ny fiainana mafy ao anatin’ny ady. Ady mafy nahatonga ny voambolana « mafy ady », niforona tamin’ny Repoblika faharoa, fotoana nanombohan’ny Malagasy maro an’isa miaina […]
Aleo hadio ny lalao !
Par Taratra sur 30/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Raikitra indray ity ny lalao baolina kitra. Tsy ny Chan na ny « Championnat d’Afrique des nations » 2018 akory no tian-kambara eto fa lalao hafa mihitsy. Tsy mbola tena izy fa fanazarantena, izay tokony hahatarafana sahady ny fahaizan’ny andaniny sy ny ankilany. Eto no anehoan’izy ireo ny paipaikady hoentina eny ambony kianja. Toy ireo lalao iraisana […]
Tsy izay aseho no maha izy azy ny tena, fa…
Par Taratra sur 29/01/2018 Edito Taratra
Hatramin’izao, tsy hita be ihany izay fampandrosoana eto… Resaka ihany ny hoe manankarena i Madagasikara; fa ny Malagasy na ny vahoaka, mahantra na mihamahantra andro aman’alina. Fitondrana no antony. Saika mibahan-toerana hatrany ny fitantanam-pahefana, fa tsy fitantanam-panjakana amin’izay hampandroso ny firenena sy hanatsarana ny fiainam-bahoaka. Hatramin’izao ihany koa, mitohy hatrany ny efa tsy nety teo […]
Tsy hita izay tena mahafaly sy mampiombona…
Par Taratra sur 27/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Hafa izao fitondrana izao? Tsy mbola misy mahavita ny vitany tao anatin’ny 50 taona mahery. Tsy hita tsinona izay mba tena mahafaly sy mampiombona ny Malagasy tsivakivolo amin’izao. Saika mibahan-toerana ny tsy fitoviam-pijery, fifandroritana, fifampiandrasana kendry tohina… Tsy mitondra ho amin’ny fifandaminana sy fandrosoana izany, fa zary fahasorenana, fifanomezan-tsiny… Izany no mahatonga ny tsy fifampitokisana […]
Efa-taona mipaka, efa taolambe tsy mikapa…
Par Taratra sur 26/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa-taona izao fitondrana izao. Inona indray no lazaina? Lazaina fa fahendrena no ho ny fahaiza-miteny ny fahaiza-mihaino. Nefa tsy hita hohenoina sy hinoana, raha izay lazain’ny mpitondra amin’izao: kabary tsy valina, fanamarinana sy fandokafan-tena… Tsy misy mahavita ny vitany tokoa tao anatin’izay 50 taona mahery? Eny, na ailika hatrany amin’ny hafa sy ny teo aloha […]
“Miakatrakatra izy izany, hoy aho lehiretsy”
Par Taratra sur 25/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa notaterina teto ny fisondrotana tsy misy farany, hita teo amin’ny vidin’ny henan’omby. Mifanahantsahana amin’ny vidin’ny henan-kisoa, 15.000 Ar, ny kilao. Mitsetsetra fotsiny sisa azon’ny fianakaviana sahirana, maro anaka, atao. Aiza no ahatakarana izany ? Any amin’ny faritra maro any, tsy misy izay tsy midangana ny vidin-javatra, indrindra ireo tena ilaina eo amin’ny fiainana andavanandro. […]
Par Taratra sur 24/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Lehibe no manaiky: tsy fitia fa hena-maso; kely no manaiky: tsy fitia fa tahotra. Amin’izao fotoana izao, saika tsy izay ohabolana na fahendren-drazana izay loatra intsony ny zava-misy sy iainana. Tsy tahotra tsy henatra izao… Na eo ihany ny tahotra sy henatra, fa mifamotitra na tsy araka ny tokony izy. Ny lehibe izao entin-tahotra ary […]
Mangataka andro lava…
Par Taratra sur 23/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa ao anatin’ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana ny mpitondra amin’izao, na inona filaza sy fanamarinan-tena. Tsy matoky tena noho ny tsy fahombiazana? Na tahotra fitsaram-bahoaka amin’ny fifidianana, ka tsy mahandry tantana. Manana ny fijeriny ary efa mety tapa-kevitra tokoa ny vahoaka, matoa nangina sy tsy nihetsika izay ela izay? Iaraha-mahita izao na itadiavan’ny mpitondra porofo […]
Tany sy fanjakana tsy tan-dalàna…
Par Taratra sur 22/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Anisan’ny fanambin’ny fitondrana ny hoe tany sy fanjakana tan-dalàna? Raha izay tany tan-dalàna aloha, tsy hita be ihany amin’ny tsy fandriampahalemana, ady sy fandrobana tany, fitsaram-bahoaka, fitrandrahana harena an-kibon’ny tany gaboraraka, fanondranana an-tsokosoko harem-pirenena… Efa tsy mahataitra sy tsy zava-baovao amin’ny maro intsony izany amin’izao fitondrana izao, zary mahazatra sy mitaiza isan’andro vaky aza, na […]
An-kifonofono mahabe honohono… mamono
Par Taratra sur 20/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tato ho ato, mahabe resaka ny zava-tsy mazava eto amin’ny fiainam-pirenena, na ny ao anaty fanjakana manokana. Efa hatramin’izay izany… Nahoana? Olona tsy niomana sy vonona hitondra fanjakana no mitantana firenena, ka sy mibahan-toerana ho azy ny fitantanam-pahefana fa tsy fanjakana. Tsy mahagaga raha tsy to teny amin’ny kitsapatsapa sy andranandrana amin’izay ataony. Izao faramparany […]
Par Taratra sur 19/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy takona afenina toy ny kary am-pamoloana ny disadisa eo amin’ny Praiminisitra Mahafaly Olivier sy ny filohan’ny Antenimierandoholona sady lehiben’ny antoko HVM, Rakotovao Rivo. Ho lasa filoham-pirenena mpisolo toerana, atsy ho atsy, ity farany. Mety tsy ho zakan’ny praminisitra ny hoe minisitra tao amin’ny governemantany no hibaiko azy. Afo nampirehitra ny vanja koa ilay fanambarana […]
Iza ny ho tratra voalohany?
Par Taratra sur 18/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Mbola tsy tapitra ny “Raharaha Houcine Arfa”. Vao mainka aza miitatra be ny resaka, taorian’ilay fanalam-baraka mpitondra fanjakana nataon’ity lehilahy nitsoaka ny fonja teto Madagasikara ity, rehefa tonga any Frantsa izy. Tsy misy manenjika, afaka nanondro molotra mpitondra ho nandray volabe avy aminy ary nitantara ny fomba nialany teto Madagasikara ity vazaha voalaza fa mpanolontsain’ny […]
Fitokonana, fitakiana, rota-dava…
Par Taratra sur 16/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Fitakiana, fitokonana, fihetsiketsehana… Rota-dava tsy misy fiafarany ny eny anivon’ny oniversite eto Madagasikara. Omaly fotsiny, ohatra, fihetsiketsehana telo be izao no indray nitranga. Teny Ankatso, nihetsika nitaky ny vatsim-pianarana efa-bolana tsy voaloa ny mpianatra. Teny Vontovorona, nahatonga fihetsiketsehena indray ny tsy fahazakana ny fiakarana lava eo amin’ny saram-pisoratana anarana. Tsy vao sambany io fa asa, […]
Ady ahi-mahatratra amin’ny fifidianana…
Par Taratra sur 15/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Hanao ahoana ihany ny fifidianana amin’ity taona 2018 ity? Mahabe resaka, ahiahy, tsy fifampitokisana, fifampiandrasana kendry tohina… Fiteny ny hoe ady tsy ahi-mahatratra, fa tokony ho malina mandrakariva amin’izay mety hitranga ny tena. Hafa noho izany izay ahina sy mety hitranga amin’ny fifidianana amin’ity taona ity? Tsy inona fa noho ny ataon’ny tena ihany. Izay […]
Par Taratra sur 13/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Vita iny ny androm-pirenena ho an’ny fanadiovana. Ahoana na inona koa ny manaraka? Nanadiovana saim-bahoaka tamin’ny hetsika ny hoe mila ovaina koa ny toe-tsaina amin’izay fanadiovana izay: ny fanadiovana no mahatonga ny fahadiovana, manomboka eo amin’ny tena na ny tsirairay, isan’andro sy mandavantaona… Mby aiza àry izay hoe fanovana toe-tsaina izay? Indrindra ho an’ny mpitondra […]
Par Taratra sur 12/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy misy maniry ny ratsy ! Nosantarin’ny loza voajanahary ity taona 2018 ity, ho antsika eto Madagasikara. Nitondra fahasimbana maro, miantraika any amin’ny fiainana ankapobeny, indrindra ny toekarena sy ny sosialy. Na izany aza, tsy maintsy atrehina ny antambo, tsy maintsy arenina ny simba ary tsy maintsy manana fanantenana sy finoana fa hiarina atsy ho atsy. […]
Par Taratra sur 11/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Kamo miasa ny Malagasy… Tena faran’izay kamo miasa isika. Tsy fantatra intsony na tarazo na toetra raiki-tampisaka na efa kolontsaina mihitsy no mahatonga an’izany. Hafaliana hita soritra ivelany mihitsy raha vao misy ny andro tsy hiasana. Mainka moa fa hoe ny fanjakana no manome izany fa tsy voafaritra mialoha ao anaty kalandrie, aoka fotsiny! Andro […]
Par Taratra sur 10/01/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Ivon’ny fahombiazana teo amin’ny ezaka izay natomboka tao anatin’ny efa-taona, hono, iny taona 2017 nivalona iny. Marina ve izany? Arakarakara ny toerana misy ny tena ny fahitana ny zava-misy. Izay no mety tsy mampifankahazo resaka: ny fahombiazana amin’ny sasany, fahavoazana ho an’ny hafa. Ny marina rehetra tsy filaza avokoa, raha ny fahavoazana no tanisaina? Na […]